Tantaram-piainana: Felisa syAraceli Fernández
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Letonianina Lhukonzo Litoanianina Luganda Luo Macua Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mongol Mooré Ndau Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Nyungwe Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sena Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Shona Sidama Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Aostralianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tshwa Turkmène Tuvalu Tzotzil Télougou Urhobo Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany)
Masera Lasa Nahalala An’Andriamanitra
Notantarain’i Felisa sy Araceli Fernández
NIVAZAVAZA tamiko i Araceli zandriko vavy hoe: “Aok’izay ka! Izaho tsy te hihaino momba an’izany fivavahanao izany intsony. Mahatsiravina ahy ny maheno an’izany. Tsy tiako maizina ianao!” Nankarary ny foko izany. Efa 91 taona aho izao nefa mbola tadidiko ihany ilay izy. Marina anefa ny voalazan’ny Mpitoriteny 7:8 hoe: “Aleo ny fiafaran’ny raharaha toy izay ny fiandohany.”—Felisa.
Felisa: Mpivavaka be ny fianakaviako. Nisy 13 ny havanay mompera na niasa tany amin’ny Eglizy. Nasandratry ny Papa Jean-Paul II ho olo-masina mihitsy aza ny dadatoako, taorian’ny nahafatesany. Mompera izy ary nampianatra tany amin’ny sekoly katolika. Tsotsotra koa ny fianakaviako. Mpanefy i Dada, fa i Neny kosa mpamboly. Valo izahay dia izaho no zokiny indrindra.
Nisy ady an-trano teto Espaina, tamin’izaho 12 taona. Nogadraina dadanay taorian’ilay ady, satria tsy nanohana ny fitondrana jadona nisy teto. Lasa sahirana i Neny namelona anay, ka nisy namany nampirisika azy handefa an’i Araceli sy Lauri ary Ramoni zandriko vavy any amin’ny masera any Bilbao. Any mantsy mba misy sakafo.
Araceli: Vao 14 sy 12 ary 10 taona izahay tamin’izany, ka nalahelo be mihitsy nisaraka tamin’ny fianakavianay. Nanadio no asanay tany Bilbao. Nafindran’ny masera tany Zaragoza izahay, roa taona tatỳ aoriana. Ngeza kokoa ilay toerana tany, ary fikarakarana zokiolona ilay izy. Nanadio lakozia no asanay. Mbola kely anefa izahay, ka nandreraka be anay ilay izy.
Felisa: Mompera tao an-tanànanay ny dadatoako. Nalefan’izy sy Neny tany amin’ny masera tany Zaragoza koa aho, rehefa lasa tany izy telo vavy. Nisy ankizilahy izay mantsy taratara tamiko, ka nieritreritra ry zareo hoe aleo aho halefa miasa any, amin’izay tsy mahita an’azy. Tia fivavahana aho ka tsy nampaninona ahy ilay hoe hiara-mipetraka kelikely amin’ny masera. Efa mpamonjy Lamesa aho isan’andro. Efa nieritreritra mihitsy aza aho hoe tiako raha mba lasa misionera aho, satria misionera katolika tany Afrika ny havanay anankiray.
Ankavia: Tranon’ny masera any Zaragoza, any Espaina Ankavanana: Baiboly fandikan-tenin’i Nácar-Colunga
Tsy mba nampirisika ahy hanatratra an’izany tanjoko izany anefa ry masera. Nahatsiaro ho voafehifehy be aho tany. Nody àry aho herintaona taorian’izay, mba hikarakara an’ilay dadatoako. Izaho no nanao ny raharahany. Nanao toko sapile koa izahay isan-kariva. Tiako koa ny nikarakara voninkazo tao am-piangonana sy nampihaingo sary masina, anisan’izany ny sarin’i Maria.
Araceli: Tamin’izaho tany Zaragoza no nanao ny voady voalohany fanaon’ny masera. Niova ny fiainanay avy eo, satria nosarahina izahay telo vavy. I Ramoni najanona tany Zaragoza, fa i Lauri nalefa tany Valence. Izaho kosa nalefa tany Madrid, ary tany aho no nanao ny voady faharoa. Fandraisana mpianatra sy zokiolona ary vahiny hafa ilay tranon’ny masera tany, ka be atao be izahay. Tao amin’ny hopitalin’ny masera aho no niasa.
Tsoriko fa diso fanantenana aho. Nanantena aho hoe hamaky Baiboly izahay dia hahazo tsara azy io. Tsy nisy resaka momba an’Andriamanitra sy Jesosy mihitsy anefa tany, sady tsy mba nampiasa Baiboly izahay. Teny latinina kely fotsiny no mba nianaranay, dia ny fiainan’ny “olo-masina.” Nivavaka tamin’i Maria koa izahay. Nanao raharaha be izahay ankoatra izay.
Lasa niady saina be aho ka niresaka tamin’ny lehiben’ny masera hoe: ‘Sao dia mba tsy rariny hoe miasa mafy aho nefa olon-kafa no mahazo tombony? Tsy aleo ve aho mandeha manampy ny fianakaviako? Ry zareo mantsy sahirana.’ Nohidian’ilay masera tao amin’ny efitra iray anefa aho, amin’izay, hono, miova hevitra.
Intelo aho no nohidiany hoatr’izany. Hitany anefa hoe tsy laitra nakisoka aho, ka nasainy nanoratra hoe: “Hiala aho satria aleoko manompo an’i Satana toy izay Andriamanitra.” Tezitra be aho. Tsy hanoratra an’izany mihitsy aho na dia tena te hiala tao amin’ny masera aza. Nangataka hiresaka tamin’ny mompera iray aho tamin’ny farany, ary notantaraiko taminy ilay olana. Niresaka tamin’ny diosezy izy, ka naverina tany Zaragoza aho. Navela hody aho, volana vitsivitsy taorian’izay. Niala koa i Lauri sy Ramoni taoriana kelin’izay.
ILAY BOKY VOARARA
Felisa: Nanambady aho tatỳ aoriana, ary nifindra tany Cantabrie. Mbola namonjy Lamesa foana aho. Nisy zavatra nanaitra an’ahy anefa tany am-piangonana, indray alahady. Nasehon’ny mompera avy teny ambony polipitra ilay boky hoe Ny Fahamarinana Izay Mitarika ho Amin’ny Fiainana Mandrakizay, sady nivazavaza izy hoe: “Hitanareo ity boky ity? Raha misy manome anareo hoatran’ity, dia omeo an’ahy na ario!”
Tsy nanana an’ilay boky aho, saingy te hahazo an’ilay izy teo no ho eo ihany. Nahagaga fa nisy Vavolombelona roa tonga tao amiko, andro vitsivitsy tatỳ aoriana, ary nahazo an’ilay boky aho. Novakiko ilay izy ny alin’iny, ary nanaiky hianatra Baiboly aho rehefa niverina ry zareo.
Resy lahatra aho hoe nahita ny fivavahana marina. Efa tia fivavahana aho taloha, ka lasa tena tia an’i Jehovah sy nazoto nitory. Natao batisa aho tamin’ny 1973. Niezaka nanao izay vitako aho mba hitoriana tamin’ny fianakaviako, na dia tsy tena afaka nanao an’izany aza. Tsy tia maizina an’ilay fivavahako ry zareo, indrindra fa i Araceli, araka ilay efa nolazaiko teny aloha.
Araceli: Nijaly aho tany amin’ny masera, ka lasa nahasorena ahy ny fivavahana. Mbola namonjy Lamesa anefa aho isaky ny alahady, ary nanao toko sapile isan’andro. Tiako hazava tsara amiko ny Baiboly, ka nivavaka tamin’Andriamanitra aho. Rehefa niresaka momba an’ilay fivavahany anefa i Felisa, dia notoheriko daholo ny teniny. Nafana fo be mantsy izy, ka noheveriko hoe lasa adalan’ilay fivavahana.
Niasa tany Madrid aho tsy ela taorian’izay, ary nanambady. Vao mainka aho lasa tsy tia fivavahana. Tsy niangona intsony aho satria hitako hoe tsy mampihatra an’izay voalazan’ny Filazantsara akory ny olona mazoto mamonjy Lamesa. Lasa tsy nino aho hoe misy ny “olo-masina” sy ny afobe, ary hoe afaka mamela heloka ny mompera. Nariako daholo ny sary masina tao amiko. Tsy haiko tamin’izany raha nety ny nataoko na tsia. Kivy aho, nefa nivavaka foana hoe: “Andriamanitra ô! Mba ampio aho fa te hahafantatra anao!” Nisy Vavolombelon’i Jehovah tonga foana tao amiko, fa tsy noraisiko mihitsy satria tsy natokitoky fivavahana intsony aho.
Lasa nianatra Baiboly i Lauri sy Ramoni, taoriana kelin’ny 1980. Tany Frantsa i Lauri no nipetraka, fa i Ramoni tany Espaina. Nieritreritra aho hoe voafitaka hoatran’i Felisa koa izy roa. Nisy ramatoa Vavolombelon’i Jehovah izay anefa teo akaikinay. Angelines no anarany, ary lasa namako be izy. Nampirisika ahy hianatra Baiboly foana izy sy ny vadiny. Hitany hoe tena te hahalala an’izay voalazan’ny Baiboly aho, na dia niteny aza hoe tsy tia fivavahana. Nanaiky ihany aho, saingy niteny hoe: “Hianatra aho raha ny Baiboliko no ampiasaiko.” Fandikan-tenin’i Nácar-Colunga ilay Baiboliko.
NAMPIFANKATIA ANAY NY BAIBOLY
Felisa: Natao batisa aho tamin’ny 1973. Nisy 70 teo ho eo tamin’izany ny Vavolombelona tany Santander, renivohitr’i Cantabrie, eto Espaina. Nidadasika ny faritaninay, ka nandeha bisy izahay tamin’ny voalohany, ary nandeha fiara tsotra tatỳ aoriana. Voatetinay ireo tanàna kely be dia be tany.
Betsaka ny olona efa nampianariko Baiboly, ary 11 no efa vita batisa. Katolika ny ankamaroany ka nila nanam-paharetana sy tsara fanahy aho. Efa mba Katolika nafana fo mantsy aho, ka azoko tsara hoe elaela izy ireo vao ho resy lahatra fa diso ny zavatra ninoany. Fantatro koa hoe ny Baiboly sy ny fanahy masina ihany no tena mahavita manampy azy hahalala ny marina. (Heb. 4:12) Natao batisa ny vadiko tamin’ny 1979. Bienvenido no anarany, ary polisy izy taloha. Nianatra Baiboly koa i Neny taloha kelin’ny nahafatesany.
Araceli: Mailomailo be aho tamin’izaho vao nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelona. Niova ihany anefa aho. Nampihatra an’izay notoriny ry zareo, ary izany no tena nampiaiky ahy. Lasa tia fivavahana indray aho, ary lasa nino an’i Jehovah, ka nahatsiaro ho tena sambatra. Nisy aza mpiara-monina aminay niteny hoe: “Tohizo foana Araceli izao ataonao izao fa tsara a!”
Nivavaka aho hoe: “Misaotra anao aho Jehovah fa tsy nanary ahy mihitsy ianao. Misaotra anao koa fa imbetsaka ianao no nanampy ahy, tamin’izaho te hahalala ny marina ao amin’ny Baiboly.” Nifona tamin’i Felisa aho noho ireo teny mandratra nataoko taminy. Tsy niady hevitra be intsony izahay, fa lasa tia nifampiresaka an’izay nianaranay. Natao batisa aho tamin’ny 1989, tamin’izaho 61 taona.
Felisa: Efa 91 taona aho izao, ka tsy matanjaka intsony. Efa maty koa ny vadiko. Mamaky Baiboly isan’andro anefa aho. Mivory koa aho rehefa salama, ary miezaka manompo matetika araka izay vitako.
Araceli: Tia mitory amin’ny mompera sy masera aho, angamba noho izaho efa masera taloha. Efa be dia be ny boky sy gazety nomeko an-dry zareo, ary nahafinaritra ny resakay indraindray. Nitsidika matetika an’izay mompera iray izay aho, ohatra, dia izao no teniny: “Araceli a! Tena ekeko hoe marina ny zavatra torinao, fa afaka ny hanao inona intsony moa aho amin’izao taonako izao e? Sady inona no holazain’ny mpiangona sy ny fianakaviako raha miala tsy ho Katolika aho?” Dia namaly aho hoe: “Dia ahoana izany Andriamanitra?” Sady nalahelo izy no niaiky hoe marina ny teniko. Tsy sahy nianatra Baiboly intsony anefa izy.
Nilaza tamiko ny vadiko, indray andro izay, hoe hiaraka amiko hivory izy. Tsy hadinoko mihitsy izay andro izay hatramin’izao. Efa 80 taona mahery izy tamin’izany, nefa tonga nivory foana. Nianatra Baiboly izy, ary lasa mpitory. Tadidiko tsara izahay niara-nanompo. Nahafinaritra erỳ ilay izy. Maty izy roa volana talohan’ny hanaovana batisa azy.
Felisa: Lasa rahavaviko ara-panahy ireo zandriko telo vavy, na dia nanohitra ahy aza izy ireo tamin’ny voalohany. Anisan’ny zavatra nahafaly ahy indrindra izany. Faly erỳ izahay rehefa tafaraka, satria mifampiresaka momba an’i Jehovah Andriamanitray sy ny Teniny. Samy manompo an’i Jehovah daholo izao izahay. *
^ feh. 29 Efa 91 taona izao i Felisa, 87 taona i Araceli, ary 83 taona i Ramoni. Mbola mazoto manompo an’i Jehovah foana izy telo. I Lauri kosa maty tamin’ny 1990. Tsy nivadika tamin’i Jehovah mihitsy izy.
Hizara Hizara Masera Lasa Nahalala An’Andriamanitra
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Aprily 2016